Solskjaer Oo Si Adag Uga Hadlay Kulamada United Ee Kaabiga Iskuhaya – Garsoore Sports
Solskjaer Oo Si…
Solskjaer Oo Si Adag Uga Hadlay Kulamada United Ee Kaabiga Iskuhaya
Kooxda Manchester United ayaa todobaadkan cayaartay maalmaha Khamiis, Axad iyo Talaado waxayna khamiista soo aadan wajihi doontaa kooxda Liverpool.
Tababaraha kooxda Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa dhaleeceeyay jadwalka kulamada horyaalka ee kooxdiisa, wuxuuna ku tilmaamay “wax aan macquul aheyn” iyadoo ay jirto daal ay dareemayaan xiddigihiisa.
Solskjaer ayaa soo saaray kooxdiisa labaad kulankii talaadadii ay guuldarrada 2-1 ka soo gaartay Leicester City, taasoo imaaneysa kaliya labo maalmood kaddib markii ay 3-1 kaga badiyeen Aston Villa Premier League.
Liiska kulamada Red Devils waxaa kusoo kordhay u soo bixitaankoodii finalka Europa League, iyagoo dhammeystiray safarkoodii Khamiistii markii ay wadar ahaan 8-5 kaga badiyeen Roma.
Laakiin dib u dhaca United ayaa waxaa uga sii darnaa kulankoodii baaqiga ahaa ee Liverpool oo sababa la xiriira mudaaharaadyo ay taageerayaasha ka sameeyeen garoonka Old Trafford u baaqday, balse kulankaas ayay labada koox dib u dheeli doonaan khamiista soo aadan.
Muxuu yiri Solskjaer?
“Ma noqon karto sidan oo kale mar kale,” Solskjaer ayaa ku waramay ciyaartii Leicester kaddib.
“Ma ciyaari kartid Khamiista, Axadda, Talaadada, Khamiista – waa wax aan macquul aheyn.”
“Taasi waa sababta aan ugu qasbanaanay inaan sameyno isbadaladan maxaa yeelay waa wax aan horay loo maqal.”
“Haddii ay labo maalmood u dhexeyso, wax dhibaato ah ma jiraan laakiin tani waa wax aan macquul aheyn inay ciyaartoydu soo bandhigaan heerar sarreeya habeenka Khamiista, Axadda, Talaadada, Khamiista. Waa wax aan macquul aheyn.”